Latin Restaurant Salud - အသေးစိတ် ဖော်ပြခြင်း | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Latin Restaurant Salud အသေးစိတ် ဖော်ပြခြင်း | Yangon
Latin Restaurant Salud
တရုတ် အစားစာ / အီတာလီလျံ အစားစာ / အနောက်တိုင်း အစားစာ
တရုတ် အစားစာ | အီတာလီလျံ အစားစာ | အနောက်တိုင်း အစားစာ
ထမင်း နှင့်ဟင်းလျာ | အချိူပွဲ
ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် | ပြင်ပ သို့ယူဆောင်သွားနိုင်သည်။ | အားကစား တီဗွီ | လေအေးပေးစက်
စုံတွဲ | အဖွဲ့လိုက်၊ပါတီ | နိုင်ငံခြားမှလာရောက်လည်ပတ်သူ | စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် | သင်တင့်သောဈေးနှုန်း
05:00 PM - 11:00 PM ( ပိတ်သည် တနင်္လာနေ့ )
No. 70C, Shwe gon tine Road, Bahan Township, Yangon.
Misfit Roof Cafe
Excel Crystal Jade Restaurant
Pyi Thit Cafe & Restaurant
တရုတ် အစားစာ, ကိုရီးယား အစားစာ, ထိုင်း အစားစာ